Sonos Beam, jerentsika angamba ny feon-kira tsara indrindra | Vaovao momba ny gadget
Sonos Beam, jerentsika angamba ny fehezam-peo tsara indrindra
Miguel Hernandez | | General, hevitra
Izahay indray dia voampanga amin'ny famakafakana vokatra avo lenta avo lenta, dia ny orinasa indray mandeha ity Sonos ilay nanapa-kevitra ny hiaraka aminy izahay hahita izay nafenin'ity bara feo hafahafa ity, izay mihoatra lavitra noho izany, toy ny vokariny tsirairay.
Manana ny andrasana amin'ny fahitalavitra izahay Sonos Beam, milaza aminao ny mampiavaka azy izahay, ny vidiny ary mazava ho azy fa mamakafaka ny antsipiriany rehetra izahay. Aza adino ity famakafakana mahaliana ity mba hahitana izay mahatonga ny Sonos Beam resahina ho tena miavaka, ary mazava ho azy fa inona ireo teboka malemy.
1 Volavola sy fitaovana: izay efa fanaon'i Sonos antsika taloha
2 Fifandraisan-davitra sy fitaovana enti-miasa: mba tsy hanadinoanao na inona na inona
3 Ny feo sy ny fahaizan'ity Sonos Beam ity
4 Kalitaon'ny feo sy ny traikefan'ny mpampiasa
Volavola sy fitaovana: izay efa fanaon'i Sonos antsika taloha
Sonos dia tsy manota velively amin'ny fampiasana fitaovana ratsy, izay miaraka amina endrika minimalist, ilay malaza be izao, dia ahafahantsika manana vokatra Sonos amin'ny ankamaroan'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano ao an-tranontsika, na inona na inona fomba ananantsika. Raha ny marina, ny tovolahy ao Sonos ihany no mahalala ny fomba hanaovana vokatra lafo sy tsara toy izany afaka tsy ho hitan'ny maso mitanjaka. Voalohany indrindra, ity Sonos Beam ity dia manome habe ho antsika 651 x 100 x 68,5 mm, refy izay miaraka aminy efa ho 3 kg ny lanjany, Ny mpandahateny Sonos dia manana lanja mavesatra foana, ny Beam dia tsy ho latsa-danja.
Mandritra izany fotoana izany, ny fanamboarana azy dia vita amin'ny plastika mampiavaka ny marika, manolotra azy amin'ny loko roa: mainty sy fotsy. Amin'ny lafiny iray, ny fitaovana dia fonosina amin'ny lamba "acoustically mangarahara" tanteraka avy eo aloha ka hatrany aoriana mandalo ny sisiny. Boribory io Sonos Beam io, toy ny fisorohana hatrany ny zoro sy ny fiezahana hahatratra ny firindrana amin'ny endrika. Ambony, toy ny etsy ambany, fisaka tanteraka izy, ary misongadina indray ny minimalism, na dia hafahafa aza isika mampiasa mpandahateny Sonos izay tsy metaly ny fitotoany. Afaka mahita ny loko roa amin'ity rohy ity ianao.
Ny eo aloha dia tarihin'ny anaran'ny marika vita pirinty amin'ny vinyl, raha ho an'ny tapany ambony dia avelantsika ny afovoany ny touchpad fanaraha-maso multimedia, ary koa ny sary famantarana ny mpandahateny izay maneho ny asan'ny mpanampy ny feo izay ankafizin'ity Sonos Beam ity (mbola tokony hiandry ny kinova espaniola an'ny Alexa ...). Ao aoriana dia indentation kely no ho fonenan'ny fifandraisana sy ny bokotra fampifanarahana hanamorana ny fiainantsika.
Fifandraisan-davitra sy fitaovana enti-miasa: mba tsy hanadinoanao na inona na inona
Andao hiresaka momba ny tariby aloha, ny famatsiana herinaratra dia toa mifandray amin'ny alàlan'ny tariby manana, na dia fenitra mifanaraka amin'ny tariby maro toa an'ireo izay saika ampiasain'i Sony foana aza. Amin'ny lafiny iray dia manana fifandraisana isika LAN (Ethernet) ho an'ireo tsy manana tamba-jotra tsara Wifi ao an-trano ary koa ny tariby HDMI-ARC hahafahantsika mampifandray izany mivantana amin'ny fahitalavitra. Ity tariby HDMI ARC ity dia iray amin'ireo mpiorina amin'ny fitaovana ary tokony homarihina fa manana namana kely tsy ampoizina isika, HDMI to Tariby optika fa nahita antsipirian'ny habibiana tamin'ny Sonos izahay.
Bluetooth (tsy ho an'ny feo fa ho an'ny fifandraisana voalohany)
2,4 GHz sy WiFi WiFi misy tarika 5 GHz
Mpanampy amin'ny feo: Alexa sy Google Home (tazomina any Espana)
Adapter HDMI> Tariby optika
Mbola mora kokoa aza raha tsy mila tariby isika, izany no nanamboarana azy, satria ankoatry ny fahafahantsika mifehy ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny HDMI ARC dia manana ny fiasa rehetra isika Sonos dia manolotra antsika amin'ny alàlan'ny fampiharana azy ho toy ny rohy tanan'ny Spotify, Apple Music ary mpamatsy mozika streaming maro hafa, ary ny Beam dia mihoatra ny bara feo fotsiny, raha ny marina dia hiteny aho fa bara feo ary koa mpandaha-teny Sonos feno. Ho an'ity dia tsy mila manararaotra ny rafitra plug-and-play fotsiny isika, afaka telo segondra monja dia ampifanarahina tanteraka tsara ilay fitaovana, iray amin'ireo marika mampiavaka ny marika.
Ny feo sy ny fahaizan'ity Sonos Beam ity
Tsy ilaina intsony ny milaza fa manasongadina ity mpandahateny ity Woofers miendrika elliptika 4 miaraka amin'ny valiny feno matetika, radiator telo pasif izay manatsara ny vokatra bass amin'ny alàlan'ny fanolorana fanodikodinam-bola kely ary tweeter izay ilaina tanteraka hiantsoana ny Sonos Beam ho bara fanamafisam-peo. Raha manontany tena ianao hoe maninona, dia satria ity mpandefa bitsika ity no hanasongadinana ireo fifanakalozan-kevitra rehefa mijery sarimihetsika na ohatra ny vaovao isika, tsy mila feo ambadika hafa handrakofana ny vaovao tian'izy ireo atolotra anay.
Mba hanolorana feo manara-penitra ananantsika fanamafisam-peo nomerika dimy kilasy D, ary na eo aza ny fampitandreman'i Sonos antsika fa vahaolana ho an'ny efitrano kely sy salantsalany izy io dia mazava amintsika ny fahaizan'ny Play: 3 na ny Play: 5, noho izany tsy nanantena izahay fa kely noho ny Sonos Beam . Tsy mamita-tsofina ny sofintsika, ary mino marina aho fa ampy mihoatra ny efitrano mahazatra (raha ny marina dia mieritreritra aho fa be dia be), ary raha misy fisalasalana, afaka miaraka aminy hatrany isika miaraka amin'ny Sonos One noho ny efitrano malalany rafitra. Amin'izay mba, Azontsika atao ny mankafy ireo signal an'ny Stereo PCM sy Dolby Digital 5.1Na izany aza, very Dolby Atmos na DTS malaza be isika amin'ny atiny BluRay.
Raha fintinina dia tsy maintsy ekeko fa sarotra tamiko ny mahatakatra ny fomba nahafahan'ny bandy ao Sonos nametraka zavatra kely dia kely, na dia tsy tokony ho gaga aza aho raha nandinika fa nanandrana vokatra maro hafa an'ny marika izahay ary nomen'izy ireo antsika izany fahatsapana izany, atahorana ho toa tsy manaja ny famakafakana, Tsy maintsy lazaiko fa tsy diso fanantenana mihitsy i Sonos (mandrak'izao…).
Kalitaon'ny feo sy ny traikefan'ny mpampiasa
Mifanaraka amin'ny teboka teo aloha, dia tsotra ny famintinana: Feo mafy ity Sonos Beam ity ary tsara ny feony. Saika nandramako daholo ny herin'aratra izay arosony ary tsy hitako fa misy "loto" na fatiantoka kalitao, na inona na inona mpamatsy azy, na Spotify, Apple Music na televiziona mihitsy. Tokony holazaiko fa ny mankafy lohateny amin'ny Netflix miaraka amin'ity feon-kira ity dia saika fanandramana ara-pinoana, ary vao mainka aza raha mijery ireo vokatra atolotry ny Samsung, Sony na LG amin'ny vidiny mitovy aminy ianao, ary na eo aza ny fanolorana feo tsara kalitao, any aoriana lavitra izy ireo amin'ny resaka fifandraisana, ary izany ilay Sonos Beam, tiako hasongadina, tsy bara feo fotsiny izany. Tsara ny bas, marina ny fampitoviana mba tsy hahavery ny maha-izy azy ary misy subwoofer fanampiny zara raha misy (raha ny ahy dia manana iray ao amin'ny fantsom-peo Sony aho), io no mahaliana indrindra an'ny set.
Na izany aza, tena ampirisihiko ny hialana voly amin'ny ekarista, satria rehefa mifangaro mihetsika ny hetsika sy ny fifanakalozan-kevitra ny sarimihetsika, dia ho hitantsika ny fanamafisana ny bas izay tsara ho an'ny fihainoana an'i Reggaeton ao an-trano, saingy tsy dia tsara loatra. mijery sarimihetsika amin'ny misasakalina ao an-tranonay, farafaharatsiny izany no eritreretinao mandra-pahatonganao ao amin'ny app Sonos ary mahita ny mahasoa Modely amin'ny alina, izay manararaotra ny faharanitan-tsain'ny fitaovana tsy hamelana ny fambara hivoaka ny efitrano ary hampihena ny fikorontanana nefa tsy ho very kalitao. Izany dia noho izany Tokony ho fantatsika ny mahasoa sy ny fahaizan'ity bara fanamafisam-peo ity hahafahana mampifanaraka azy amin'ny fotoana sy ny toe-javatra. Ny feo dia mihoatra noho ny ampy, indrindra ny fandinihana ny fahaizany miovaova.
Ny traikefan'ny mpampiasa tamin'ity indray mitoraka ity angamba tsy dia maivana tahaka ny an'ny vokatra Sonos hafa, nifantoka tamim-pahatokisana tamin'ny fihainoana mozika. Ity vokatra ity dia mifantoka betsaka kokoa, ary izany no antony tsy maintsy hanararaotantsika ny fampiharana azy mba hamolavolana ny audio toa ny plastika ary hanolotra antsika ny fampisehoana azo antenaina amin'ny zavatra toa an'io. Raha hampitahantsika amin'ny rafitra Denon miaraka amin'ny DTS, fahafaha-manao 7.1 izay tsy isalasalana fa ho betsaka kokoa ny feo, dia tsy hita isika. Ny mampiavaka an'io Sonos io dia ny fahaizany mamorona, ny kalitaon'ny feo ary ny fifandraisana. Angamba izaho sisa tavela amin'ny tantely eto am-bavako mba hitsapana ny fomba hiarovany tena amin'i Alexa, na dia eo aza ny fahaizany mifanaraka tanteraka amin'ny AirPlay 2 ka ny fampidirana azy ao amin'ny rafitry ny automatisation an-tranoko dia tena tsotra.
Sonos Beam famerenana
Ekeko fa efa nanantena aho Sonos handefa zavatra toa izany, voalohany satria hitantsika tamin'ny 449 euro amin'ny loko roa misy amin'ny Amazon, Tsy lavitra ny iray amin'ireo vokatra heverina ho "lafo vidy" amin'ilay orinasa. Etsy ankilany, manjaka ny fahaiza-miasa:
Fitaovana sy endrika
Kalitao sy hery
Mbola miandry mpanampy virtoaly
Tokony hamboarinao tsara ny ekitera
Mitady fahaiza-manao sy kalitao ianao: Ity Sonos ity dia hanolotra feo manara-penitra, fifandraisana efa ho faran'izay betsaka, famolavolana tsara ary vidiny antonony.
Mitady feo Hi-Fi ianao: Avy eo ianao dia tokony handeha amin'ny karazana vokatra hafa, tsy natao ho an'ny mitaky be loatra izany, fa ho an'ireo izay mangataka zavatra betsaka kokoa noho ny feo.
Raha mitady bara feo ianao, fa mila mpandahateny mahay koa ianao, raiso an-tanana ity Sonos Beam ity satria atolotra ho toy izany rehetra izany, ho sarotra aminao ny tsy hahita zavatra mampiasa an'ity vokatra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sonos Beam, jerentsika angamba ny fehezam-peo tsara indrindra
Xiaomi dia mandeha miaraka amin'ny marika vaovao Pocophone F1 ary manapoaka ny tsena noho ny vidiny
Ahoana ny fomba hizarana horonantsary IGTV amin'ny Facebook